DEG-DEG: Maamulka Chelsea Oo Go’aan Ka Gaadhay In Frank Lampard Uu Noqdo Badalka Maurzio Sarri. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 24, 2019 at 09:33 DEG-DEG: Maamulka Chelsea Oo Go’aan Ka Gaadhay In Frank Lampard Uu Noqdo Badalka Maurzio Sarri.2019-06-24T09:33:20+01:00 CAYAARAHA
Maamulka kooxda Chelsea ayaa go’aan ka gaadhay haddii uu halyaygii hore ee kooxdooda ee Frank Lampard uu si rasmi ah shaqada tababaranimo uga badali doono Maurizio Sarro oo isla markii uu Stamford Bridge ka baxay loo magacaabay kooxda Juventus.
Maamulka kooxda Chelsea iyo Frank Lampard oo tababare u ah kooxda Derby County ayaa wada hadal dheer ku soo jiray kuwaas oo hadda la filayo in ay soo gaba gaboobi doonaan 48 ka saacadood ee soo socda.
Wargayska The sun ayaa shaaciyay in maamulka kooxda Chelsea ay Frank Lampard u magacaabi doonaan shaqada tababaranimo ee kooxda kowaad inta lagu jiro 48 ka saacadood ee soo socda.
Maamulka Blues ayaa go’aan ku gaadhay in Frank Lampard uu noqdo macalinka sida rasmiga ah u badali doono Maurizio Sarri taas oo farxad galinaysa jamaahiirta Chelsea oo si wayn u doonayay in uu Frank Lampard soo laabto.
Frank Lampard ayaa hal xili ciyaareed oo kaliya khibrad u leh shaqada tababaranimo laakiin maamulkii fiicnaa ee uu ka soo sameeyay kooxda heerka labaad ee Derby Coutinho oo uu soo gaadhsiiyay finalkii isreeb reebkii Premier league loogu soo baxayay ayaa sumcad wayn u abuurtay.
Waxa kale oo uu Frank Lampard haystaa taageerada buuxda ee jamaahiirta kooxda Chelsea maadaama oo uu yahay xidigii abid ugu fiicnaa ee maaliyada buluuga ah ee Chelsea soo xidhay.
Xidigii hore ee xulka England ee Frank Lampard oo 41 sano jir ah ayaa chelsea u soo dhaliyay 211 gool kadib markii uu u saftay 648 kulan waana xidiga haysta rekoodhka gool dhalinta abid ee blues inkasta oo uu waliba ahaa ciyaartoy khad dhexe ah.
Frank Lampard ayaa la filayaa in uu fursad wayn siin doono ciyaartoyda da’yarta ah ee kooxda Chelsea ay qaar badani amaahda kaga maqan yihiin wuxuuna taageero wayn ka helayaa khabiirada kubbada cagta England oo aaminsan in uu yahay shaqsiga ugu haboon ee shaqada Blues la wareegi kara.
Chelsea ayaa xaalad kala guur ah ku jirta isla markaana ay isku beegmeen xalado badan oo kala duwan, waxaana kooxda ka baxay ciyaartoygii ugu fiicnaa ee Eden Hazard oo Real Madrid ku biiray.
Gary Cahil ayaa haddaba laga fasaxay Chelsea waxaana la filayaa in albaabka Stamford Bridge laga saari doono Jorginho, Emerson iyo Davide Zappacosta iyada oo Lampard uu samayn doono isbadal uu kooxda dib ugu habaynayo.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo hadda uu soo baxay warka sheegaya in 48 ka saacadood ee soo socda Frank Lampard loo magacaabi doono macalinka rasmiga ah ee Chelsea waxay jamaahiirta Blues sugayaan inta ay arkayaan war saxaafadeedka kooxdoodu heshiiskan ugu dhawaaqi doonto.
« Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Isniin Ah Ka Qoreen Wargaysada Yurub.
Xaalad Bini’aadannimo Oo Laga Soo Sheegayo Gobolka Jubbada Hoose »